Mine Line: phambili nomzabalazo!
Wednesday, 02 May 2012 10:20
nguSipho B Linda, unobhala weMine Line Worker Cooperative
Umzabalazo waseMine Line yindaba yabasebenzi abangeke bayephansi ngaphandle kokulwa. Singabasebenzi abahlome ngamasu okulwa kanye nohlelo, sizimisele ukuthola izinto ezinye izinhlangano zabasebenzi eziqavile ezweni ezingazange zikuthole: ukunikeza icebo elihlukile mayelana nokwakhiwa kwemisebenzi eyizinkulungwane eyaphela eminyakeni eyedlule, futhi neminyaka ezayo njengoba kucaca ukuthi umnotho uzoqhubeka nokucikizela ngaphansi kombuso wobungxowankulu.
Konke kwaqala ngoAugust 2010 eNtshonalanga Randi ngase mayini yaseDoornkop. Emuva kancane kokungabi nemali kwenkampani iMine Line and TAP Engineering (bona Izwi labasebenzi May-July 2011), abasebenzi bathola ukuthi umqashi wakudala uWynand Mulder wayexhumene ngenkohlakalo neCommonwealth Trust, okuyinkampane ebhekelene nokungabikhona kwemali enkampanini, yaqala ukukhipha imishini kanye nempahla yasembonini. Ukuze lolukhondolo lumiswe, sathatha isinqumo sokuhlala ngenkani embonini ngoOctober 20, 2010. Sashintsha izikhiye futhi sagada inkampani imini nobusuku ngosizo lwamaqabane eSolidarity Committee, kakhulukazi iLandless People’s Movement. Sasebenzisa ithuba lokuhlala ngenkani enkampanini ukuthi sifune incazelo kulabo ababhekelene nokungabikhona kwemali eMine Line and TAP Engineering, sacela amabhange ayekweletwa wumnini wenkampani ukuthi angafuni ukubuyelwa yimali yawo, saphinde satshela umbuso ukuthi kufanele imboni ibengaphansi komfelandawonye wabasebenzi. Yilapho loludaba lwahanjiswa kwi-Industrial Development Corporation (IDC) okuyinhlangane kaHulumeni. Sacela uxhasomali kwi-IDC ukuze siqale kabusha inkampani futhi siqale ukwakha ama valivu kanye nezitimela ukuze sizokhiqizela izimboni zezimayini. Kusukela lapho i-IDC ibiyingxenye; kepha inobuso obumbaxambili- engxenyeni eyodwa ikhombise ukufuna ukusiza kodwa kwenye ingxenye ifuna izinto eziningi ezihlose ukuthi umzabalazo wase Mine Line ukhathale futhi wehlulwe. I-IDC yazama ukungcenga abasebenzi ukuthi baphume embonini ukuze inkampani ifakwe endalini ngo May 2011 yize i-IDC yayithembisile ukuthenga imishini eshodayo ukuze umfelandawonye uqhubeke nomkhiqizo. Indali yaqhubeka, abanye bathenga imishini okusolakala ukuthi babethengela umqashi osikhathi sakhe sesadlula. Enye ingqinamba wukuthi i-IDC yayifuna kwenziwe umqulu onepulani yebhizinisi okhombisa ukuthi umkhiqizo uzothengwa ezimakethe. Ukuhlanganisa umqulu onjalo udinga imali eningi yocwaningo kanye nokuthola abantu abasebenza embonini yezimayini, konke lokhu kudinga imali esingenayo thina basebenzi. Kodwa ngenxa yomzabalazo wabasebenzi ohlelekile, sakwazi ukuphoqa i-IDC ukuthi iqhubeke nokuzimbandakanya naloluhlelo. Ngokwenza njalo yayizokwazi nokuphumelelisa umyalelo wokusiza ibhizinisi elalilengela eweni futhi kwakheke namathuba emisebenzi, okuwumsebenzi osemthethweni kaHulumeni.
Ngenxa yalokhukuxoxisana, i-IDC isinikezele ngemali yokukhokhela uchwepheshe ozobhala umqulu wepulani yebhizinisi elizoyenzela umfelandawonye. Nomakunjalo isicelo semali esafakwa ngalo somqulu asiphumelelanga ngenxa yokuthi zazingekho izincwadi ezanele ezikhombisa ubukhona kwemakethe. Kwaphinde kwabanenkinga ngesikhathi i-IDC ithi abasebenzi kufanele bayothola ezinye izincwadi. Saphendula ngendlela eyodwa: ayikho imali nabantu abangakwazi ukwenza lomsebenzi.
Saqoqana, manje sesisekwa abasebenzi beCosawu, sahamba sayobhikisha emahhovisi e-IDC. Leligxathu lenza kusheshe ukutholakala kwempendulo kwi-IDC eyayinomqondo wokuya phambili, lapho yavuma ukukhokhela omunye uchwepheshe ukuthi athole izincwadi lezo.
Abasebenzi basandawonye ngalesisikhathi besebenza nochwepheshe. Uma umzabalazo wase Mine Line uqhubeka uthola ukwesekwa yizinhlangano zomzabalazo namashanhliziyo, ukunqoba kusemome. Siyakujabulela ukwesekwa yi-DLF, OKM, TCC, LPM neCOPAC abasiza ngokwakha umfelandawonye, okokugcina i-DSM ne Cosawu abaqinisekisa ukuthi umzabalazo uyaphambili usuku- nosuku.
Umzabalazo ophumelelayo unezinto ezimbili: inhlangano necebo lokulwa. Uma unenhlangano kodwa ungenalo icebo lokulwa, kuyoba nokuhlulwa. Uma unecebo kodwa inhlangano ingekho, uzoqhubeka wehlulwe bese uphoqeleleka ukuhoxa.
Phambili ngomzabalazo wabasebenzi phambili!